မင်းတစေ: အက်ကွဲနေသော ပညာရေး (သို့) အက်ducation (သို့) Crackဂျူကေးရှင်း
စိတ်တေလေကို နှိပ်ကွပ်သူ Mintasay at 11:00 AM
Thanks for your insiteful post.
အမှန်ပဲ အကိုရေ.. ပြဌာန်းစာအုပ်ထဲက စာတွေက မြင့်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် သူတို့မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ဆရာတွေ တချို့က အရည်အသွေး မပြည့်တော့ ကျောင်းသားမပြောနဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် သေချာမသိဘူးဖြစ်နေတယ်...။ ပညာရေးတဲ့...တကယ့်ကို ပြ ပြပြီး ညာနေတာ...ပေါ့
ထိတယ်ရှင်.. ဖတ်ရင်းနဲ့မျက်ရည်တောင် ကျချင်တယ်.. နိုင်ငံသာကောင်းရင် ဗေဒါတို့လဲ သူများနိုင်ငံမှာလုံးဝမနေဘူး.
တခြားနိုင်ငံတွေလောက် မတိုးတက်တောင် အထိုက်အလျှောက်ရှိရင် မြန်မာပြည်ကမခွာဘူး...
သိပ်ကောင်းတယ်အကိုရေ ... အဲ့ထက်ပိုပြီးမပြောတတ်လောက်အောင်ကောင်းတယ် .
I like the crackducation.hahha.thanks for visiting my site. Hope i can update my blog soon.thanks man
ဒီဘလော့ကစာတွေက အမြဲတမ်း ပြောင်မြောက်နေတာပဲ။
ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ပိုကောင်းတယ်... ကျွန်မလဲ ၀တ်ရုံနက်ကြီးမ၀တ်ချင်လို့..ဘာမှမယူခဲ့ဘူး..
"သားတို့၊ သမီးတို့ မျက်နှာမငယ်ခြင်ရင် ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်" ဟူသည့် မိဘတို့၏စကားသံများသည်လည်း ထိုအနှစ်မဲ့နေသော ကြက်ဥခွံဆန်ဆန် ဘွဲ့လက်မှတ်တို့၏နောက်ကွယ်တွင် ဆွံ့အခဲ့ရပြီ။
"နောက်ဆုံးတွင်တော့ မြန်မာလိုရေးတတ်ဖတ်တတ်ခြင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်လိုအနည်းငယ်တီးမိခေါက်မိရှိခြင်း တို့ကိုသာ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုအနေနှင့် ကျိတ်မှိတ်၍ယူခဲ့ရသည်။"
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ။ဒါတောင်ကြိတ်မှိတ် ယူမှဗျ။ တကယ်ဆို ကျောင်းမတက်လဲ သင်ယူလေ့လာချင်စိတ်ရှိတဲ့သူဟာ အဲဒါတွေတက်မှာပဲ။ ပေးရတာ နဲ့ ရတာ မတန်ဘူးဗျာ။ အဲဒီ့ အပြင် အချောင်ခိုစိတ်တွေ၊ ကြောက်စိတ်တွေကိုတောင် ကျောင်းက အဆစ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဗျို့ ။ ၈၈ အရေးအခင်းပြီးစ ၅တန်း ၆တန်းလောက်တုန်းက toilet တောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားခွင့်မရှိပဲ ကျောင်းသားကတ် ပြပြီးမှ တယောက်ဆီ သွားခွင့်ရတာ ခုထိမှတ်မိသေးတယ်ဗျာ။ သုံးယောက်လောက်သွားပြီးရင် ဆရာမတွေက စိတ်တို ပြီးနောက်လူကို သွားခွင့်မပြုတာက ရှိသေးတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ တတွေ အညွန့် ချိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ ခံစားမိတယ်ဗျာ။
ဒီဝတ္ထုက အတွေးတွေ ပေးသလို ရသလဲ စုံစုံလင်လင်ပေးနိုင်တယ်ဗျို့ ။ နိဂုံးကလဲမိုက်တယ်ဗျို့ ။ အပေါ်ကစာပိုဒ်တွေ အမီလိုက်နိုင်တယ်။
ဆောင်းပါးပါ သဘောတရားရေးရာကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါသည်။
မိုက်တယ်ဗျာ။ အရေးအသားကတော့ လေးစားစရာပါပဲ။
ကျွန်တော် အဲ့ဒီ ယိုင်းယိုင်နေတဲ့ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေတစ်ချို့နဲ့ ဆွေးနွေးဘူးတယ်။ ၆၂ နောက်ပိုင်းက စတယ်ထင်တယ်ဗျာ။ ပညာတက်လူတော် ချိုးနှိမ်ရေးဆိုတာ။ နိုင်ငံမှာ ပညာတက်တဲ့ လူတွေ များမှာကို လုံးဝသဘောမကျဘူး။ အုပ်ချုပ်တဲ့ အာဏာရှင်က။ အဲ့ဒီကတည်းက စလိုက်တာ အခုနောက်ပိုင်း ပိုဆိုးသွားပြီး အနှစ်မရှိရုံမက အကာပါမဲ့သွားတယ်။ ပညာရေးစနစ်ကြီး ကိုပြန်အသက်သွင်းဖို့ plan ချ၊ အချိန်ယူပြီး လုပ်မှရလိမ့်မယ်။ အစ်ကို့ ရေးသားချက်ကို လက်ခံတယ်။ ပညာရေး အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့ တစ်နှစ်အသုံးစရိတ်က ၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ အမျိုးသားပညာရေး မြင့်မားရေးဆို တာကြီးကို အားနားဖို့ကောင်းပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ ။ ပညာရေးဘလောဂ့် (http://educationinmyanmar.blogspot.com) မှာ ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။
ဝေးး အဲဒါပြောမလို့ မဂျစ် ဦးသွားတယ် ...
Sandar Hlaing said...
It isarealisitc article. Your example is very good. I felt like you while I was in Myanmar. We all feel it.
better you believe, closer you are to the goal.. :)
အရေးအသားကော ၊ အတွေးအခေါ်ကော အရမ်းကြိုက်တယ်။
Not only brain drain, getting to be brain dry from the time being :(
အတွေးအခေါ်ကို ထောက်ခံသလို အရေးအသားနဲ့ စကားလုံးတွေကလည်း အင်မတန် ကောင်းလှတာမို့ လေးစားမိပါတယ်။
ရိုးရိုး brain drain ရော internal brain drain ရော သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဆရာတွေ အရည်အချင်း မပြည့်ဘူးဆိုတာလည်း ၀န်ခံရမှာပါပဲ။ အဓိကကတော့ မြန်မာတွေရဲ့ ad hoc ကို လိုက်တတ်တဲ့ စရိုက်ကို အပြစ်ဖို့ ရမယ်ထင်တယ်။ multimedia class room တို့ ဘာတို့ပေါ့။ smart school project တို့ပေါ့။ စီမံကိန်းတွေက သိပ်ကောင်းပေးမယ့် implementation က အရမ်းအားနည်းတဲ့အခါ လုပ်သလောက်မဖြစ် သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ လူကြီးလာတုန်း ခဏတာ အပြအတွက် မလုပ်ဘဲ ရေရှည်ကို ကြည့်ကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို စပြီး ပြင်ကြရမယ်ထင်သဗျ။ နိုင်ငံတော်ကကျွေးတဲ့ ထမင်းကို စားနေကြမှတော့ နိုင်ငံတော်အကျိုးကိုလည်း ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ လူကြီး သဘောကျရုံလောက် လုပ်တာဟာ အမှန်တကယ် တာဝန်ကျေရဲ့လားဆိုတာ ပြန်လည် သုံးသပ်ကြစေလိုပါတယ်။
i really feel like as you, appreciate your article.i got B.Sc, M.Sc, M.Res and qualified to attend the Ph.D in Yangon University, but finially, mine are useless..i cannot do anything in there. .so, i nearly to sign off from my course of Ph.D..before myanmar people have common say, education is like as golden pot, but nowaday, if u have golden pot you will get education..
အက်ducation တဲ့လား? ရည်ရည်လည်လည်လန်းတယ်ဗျာ. ကြားဖူးလားမသိဘူး: ဝက်စာကျွေးပညာရေးတို့၊ ကျက်တတော်လော်ဂျီတို့ ဆိုတာတွေလေ. ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်တုန်းက အမှတ်တရတွေပေါ့. တခြားနယ်ပယ်က လူတွေထက်စာရင် ကျနော်တို့ ဆရာလောင်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိပညာရေး အခြေအနေကို ပိုနားလည်တယ်လို့ထင်ပါတယ်. သြော် အပေါ်က term အသစ်လေး နှစ်ခုကို ရှင်းပြပါရစေ. ထွင်တဲ့လူက ဦးမြင့်ဆွေ ပညာရေးစိတ်ပညာဌာန (ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်) [ဆိုင်းဘုတ်တိုင်ထည်ထည်ဝါဝါ မရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်] က ကထိကတစ်ယောက်ပါ. M Swe က ဆရာ့ရဲ့ကလောင်ပါ . အဲ ဒါပေမဲ့ ဝက်စာကျွေးပညာရေးစနစ်ကိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ မရှင်းပြတတ်ဘူးဗျ. ဝက်တွေကို အစာကျွေးတာမျိုးနေမှာပေါ့နော်. ကျက်တတော်လော်ဂျီ ဆိုတာက အဟဲ ကျနော်တို့ကျောင်းမှာ စာသင်ကြားရေး နည်းပညာအတွက် Methodology ဆိုတာ ရှိတယ်ဗျ. ဒါကို ဆရာက နမူနာယူပြီး ထွင်လိုက်တာနေမယ်. အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကို ပညာရေနို့ တိုက်ကျွေးရမဲ့ ကျုပ်တို့လို အနန္တောအနန္တဂိုဏ်းဝင် (တကယ်တော့ မဟုတ်ပါ ဆရာတွေစားပေါက်ချောင်အောင် နောက်ပေါက်တွေက ထွင်ထားတာ) တွေ ကိုယ်တိုင်က ပေးသမျှစာတွေကို ကြက်တူရွေးနှုတ်တိုက် အဓိပ္ပာယ်ကို ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘဲ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဆိုတာလို နားလည်ချင်သလိုနားလည်တာမျိုးနဲ့ ကျက်ခဲ့ရတယ်လေ. ရှက်စရာတော့ကောင်းပါရဲ့ . ဒါဟာပြဿနာတစ်ခုပါ. ပြဿနာကိုသိတဲ့ အဆင့်နဲ့တင် ရပ်မနေသင့်ပါဘူး. ဝိုင်းဖြေရှင်းကြပါ. ဝိုင်းအဖြေရှာကြပါ. မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့. တင်ပြပုံကို ခိုက်တယ်. ဒါကြောင့် အချိန်ပေးပြီး ဒီကော်မန့်ကို ရေးတာ. အသေချာဆုံးတစ်ခုက လက်ရှိစစ်အစိုးရ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးက ဘဝအာမခံချက်လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိဘူး ဆိုတာပါပဲ. ကျနော်တို့တတွေက နောက်ဆုံးသားကောင်တွေ မဖြစ်သင့်ဘူးလားဗျာ. ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်၊ လူမျိုးအတွက်၊ နိုင်ငံအတွက်၊ ကမ္ဘာကြီးအတွက်၊ အားလုံးသော ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကျနော်တို့လုပ်နိုင်တာထက်ပိုလုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့ရဲ့.
အင်း.... ဘယ်လိုမှ တော.မထင်ကြ ပါနဲ.ဝေဖန်တယ် ဆိုတာ ကဘယ်လို ဘဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်တယ်ပေါ.လေ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တွေးမိတာ ပြောချင်ပါ တယ် ကျွန်တော် ကလည်း နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ. လူပါ ကျွန်တော် တိုနိုင်ငံမှာ တကသိုလ် တန်းကျောင်းအပ် ရင်ဗျာ ပထမ လေးလ အတွက် ၄၇၅၀ကျပ် နဲ ဒုတိယလေးလ အတွက် ၃၅၀၀ ကျပ် လောက် ပေါ. စုစု ပေါင်း၈၂၅၀ ကျပ်ရယ်စာအုပ်ဖိုး ၅၀၀၀ ကျပ်လောက်ရယ် ဆို စာသင်နှစ် တခု ပြီးပါ တယ်
ဒီလိုပါ ဘဲ အခြေခံပညာ မှာဆိုရင်လည်း ကလေး တစ်ဦး ကို ကျောင်းအပ်ခါစ မှာ ငွေ ၁သောင်းလောက် ကုန်လိုက်ရင် စာသင်နှစ် တနှစ်ပြီးပါ တယ် စဉ်းစားကြည်.ကြပေါ.ဗျာ
အနောက်နိုင်ငံတွေ အနီးဆုံး စင်္ကာပူမှာတောင်ဗျာ မြန်မာငွေ ၁ သောင်းလောက် နဲ .စာသင်နှစ်တနှစ်ပြီးမယ်လို ကျွန်တော် မထင် ဘူး
ကျွန်တော် နိုင်ငီံမှာပြီးတယ်နော် ပြောရင်တော.တန်ရာ တန်ရာ ရတာပေါ. ဗျာ အမှတ်တကယ်တက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော. ဗျာ လုပ်လို.ရတာပေါ. ဒါပေမယ်. လူတန်းစားက ရှိသေးတယ်လေ မြန်မာနိုင်ငံမှာဗျာ ဥရောပ နိုင်ငံတွေ က ပညာရေးလို သုံးရင် သုံးလို.ရတယ် အဲပညာရေး ကို ကလေးတွေက တက်ရင်တောင် မိဘတွေက ထောင်.ပန်.နိုင်ပါ.မလား ကျွန်တော် နိုင့်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်နေတာ ကျောင်းလခ ရယ် အဆောင်ခရယ် ကို တလ ကို $500 သွင်းနေရပါ တယ် မြန်မာ မှာ အဲလို သွင်းနိုင်တဲ မိသားစု က ဘယ်လောက်ရှိမှာလည်း ၁ လကိုနော် တနှစ် ကို မဟုတ် ဘူး အဲလို လုပ်ပေးလိုက်ရင်ကော ရည်ရှည်မှာ ဘာဖြစ်လာ မှာ လည်း လူတန်းစားပြသနာဖြစ်လာ မယ်လေ ပညာ တက် လူတန်းစားရယ် လိုပေါ်လာပြီး ဥရော ပ အလယ်ပိုင်း ခောတ်ကိုပြန် ရောက်မယ်လေ အရာအားလုံးက သုည ကနေ လာ တာ ပါ အဓိက က ပတ်ဝန်းကျင်က အရေးမကြီး ဘူး ရလို မှု.နဲ ဘဲ ဆိုင်တယ် လိုချင်တဲ စိတ်ရှိ ဖို.လို အပ်တယ် ကျွန်တော် အယူ အစ ပါ နော် ပေးတဲ သူက ဘယ်လောက်ပေးနေ ပါစေ မယူတက်ရင်လည်း မရပါ ဘူးဗျာ တခုတိုးတက်လာရင်တော. တခု စုတ်ယုတ်တက်ပါ တယ် ကျွန်တော် သိချင်တာ ကတော. အခုပညာရေး ကို တိုးတက်အောင် ဘာလုပ်မလဲ ၀ိုင်းတိုင်ပင်မယ် ဆိုရင် .............. မှားတာရှိရင်ခွင်.လွတ်ပါ ရှု.ထောင်.ကို တခုတည်းမရေးဘဲ ဘက်ပေါင်းစုံ လှည်.တွေးကြည်.စေချင်တယ်..... ကျေးဇူးပါ နော်
ye ye tin said...
KNOWING ME KNOWING YOU !!
BUT! WE CAN'T DO ANYTHING